छोराछोरीको शैक्षिक केन्द्र "Sirius", सोची: फोटो, ठेगाना, समीक्षा
लामो समय को लागि भेंट र प्रतिभाशाली बच्चाहरु हाम्रो देशमा उपेक्षित छन्। शैक्षिक कार्यक्रम को विशिष्टता व्यक्तिगत विकास समावेश थिएन, पृथक को मान्छे को बाँकी बीचमा "तारा"। भेंट विद्यार्थीहरूको पहिचान को मुद्दा मा एक सफलता "Sirius" (सोची) शैक्षिक केन्द्र भयो।
संसारमा कुनै analogues छ जो परियोजना,
को रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन गरेको फंड अग्रसर मा स्थापित भएको थियो "प्रतिभा र सफलता।" उहाँले फंड को न्यासी को बोर्ड को अध्यक्ष बने। यस कोष द्वारा के कार्यहरू निर्णय गर्नुपर्छ? यसको सिर्जनाको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रव्यापी प्रतिभाशाली मानिसहरू रचनात्मक, बौद्धिक, भौतिक क्षमता प्रकट गर्ने, तिनीहरूलाई बौद्धिक विकास गर्न मदत, पहिचान थियो। समस्या समाधान गर्न, एक शैक्षिक केन्द्र "Sirius" (सोची) खुलेको छ। पनि युरोपेली देशहरूमा यस्तो केन्द्र छैन, त्यसैले रूस गर्व हुन सक्छ!
नयाँ "स्टार" सोची मा रोशनी
शैक्षिक केन्द्र "Sirius" (सोची) को brightest तारा पछि नाम थियो। यो सँगै सबैभन्दा प्रतिभाशाली शिक्षक र विद्यार्थीहरूको रूसी संघ सबैभन्दा टाढाको कुनामा देखि ल्याउँछ। मध्य-जुन 2015 देखि शिविरमा एक प्रयोगात्मक मोडमा थियो। राज्य को सेप्टेम्बर 1 हेड आधिकारिक भेंट बच्चाहरु लागि शैक्षिक केन्द्र "Sirius" (सोची) खोल्न घोषणा गरेको छ।
सोची किन रूसी संघ को भेंट छोराछोरीको लागि मंच संगठित गर्न छान्नुभएको थियो? यसलाई यहाँ Olympiad, आयोजित छ यसको समापन पछि छोडेर वस्तुहरु को आधारमा र शैक्षिक केन्द्र "Sirius" (सोची) सिर्जना गरिएको थियो। यो परियोजना विज्ञान र शिक्षा, संस्कृति र खेल मंत्रालय समन्वय।
शैक्षिक केन्द्र "Sirius" सोची भेंट रूसी schoolchildren अघि नयाँ क्षितिज खोल्न गर्नुपर्छ। यहाँ बिना सामाजिक स्थिति, निवास स्थान, वित्तीय क्षमता, सामाजिक स्थिति, छोराछोरी पर्खिरहेका छन्। केन्द्र बच्चाहरु को लागि निःशुल्क रहनुहोस् कार्यक्रम। सोची शिक्षा केन्द्र - त्यो विद्यार्थी "Sirius" प्रदान गर्दछ? उहाँलाई भ्रमण गर्ने बच्चाहरु द्वारा पेश फोटो, म व्यक्तिगत र बौद्धिक क्षमता को बोध लागि सम्भावनाहरू सेट गरिएको छ कि पुष्टि। परियोजना गतिविधिहरु, कार्यशालाओं, रोचक मनोरञ्जन घटनाहरू, नेतृत्व गुणहरू, रचनात्मक सोच को विकास र संचार सीप पहिचान शैक्षिक र सांस्कृतिक स्तर बृद्धि गर्न मद्दत।
रूसी संघ को अध्यक्ष को आकलन
भ्लादिमिर पुटिन विचार मात्र महान, तर पनि धेरै सुन्दर छैन भनेर उल्लेख गरे। उहाँले यहाँ बच्चाहरु अतिरिक्त ज्ञान कुराकानी गर्न प्राप्त गर्न सक्छन् आशा व्यक्त गरे। म रूसी संघ को अध्यक्ष र नयाँ मिडिया सेन्टर द्वारा भ्रमण गर्नुभएको थियो। "Sirius" - शिक्षा केन्द्र (सोची), सरकार जवान पुस्ता को विकास गर्न ठूलो ध्यान दिन्छिन् भन्ने तथ्यलाई गर्न testifying।
कसरी "Sirius" मा हुन
शिक्षा केन्द्र (सोची) - का को "Sirius" प्राप्त गर्न कसरी बाहिर आंकडा प्रयास गरौं। यहाँ यात्रा गर्ने अधिकार कसले जीव, रसायन, भौतिक, गणित मा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू देखाउन, खेल मा उपलब्धिहरू (आंकडा स्केटिङ र हकी) छ, 10 17 वर्ष देखि रूसी विद्यार्थी छन्, शास्त्रीय ब्यालेट आफूलाई देखाए। लागि बच्चाहरु मा शैक्षिक संगीत, चित्रकला प्राप्त संलग्न ढोका "Sirius" खुला छ।
केन्द्र निम्न साधन मा प्ले बच्चाहरु विकास गर्न मद्दत गर्छ:
"Sirius" को बासिन्दाहरूलाई सुन्दर हिमालहरू र काला सागर को अद्वितीय सौन्दर्य नजिकै स्थित छ जो होटल, को सहज कोठा बाँचिरहेका छौं। को "ग्रेनाइट विज्ञान" साथै केन्द्र को विद्यार्थी एक "बुफे", आइसक्रिम, मिठाईहरू र पनि चकलेट फव्वारे विशेष पट्टी को रूप मा एक छ-शक्ति प्रस्ताव राखे। आफ्नो खाली समय मा, बच्चाहरु खेल स्थलहरू, यात्रा सिनेमाहरू मा संलग्न छन्। तिनीहरूलाई सोची कार्यक्रम को स्थलहरुको यात्रा संगठित लागि भेंट रूसी विद्यार्थी, मनोरञ्जन पार्क जानुहोस्। को गर्मी समयमा, छोराछोरी शिविरमा यसको आफ्नै सुसज्जित समुद्र तट छ किनभने, काला सागर मा पौडी खेल्न सक्छ।
को "तारा शिविरमा" र इनडोर र आउटडोर पूल, थर्मल स्नान, एक विशेष रूसी, फिनिस, टर्की स्नान संग त्यहाँ। शिविरमा मा राष्ट्रिय डिजिटल पुस्तकालय, तपाईं सधैं सही पुस्तक वा शैक्षिक पत्रिका पाउन सक्नुहुन्छ जहाँ एक शाखा छ।
के यति राम्रो शैक्षिक "Sirius" (सोची) केन्द्र? यहाँ भ्रमण गर्न व्यवस्थित गर्ने ती भाग्यमानी व्यक्तिहरूलाई बायाँ प्रतिक्रिया, रूसी संघ को अध्यक्ष द्वारा समर्थित परियोजना को महत्व र Timeliness, को प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्। शिविरमा लागि आमाबाबु 'दिन उपलब्ध छैन, तर ती तस्बिर भएकालाई आमाबाबुको पठाइएका छन् कि "Sirius" मा, आमा र बाबु यहाँ छोराछोरीलाई फेला को उपयोगिता देखाउन गर्दा।
"चतुर" र "चतुर" परिवर्तन
तीन हप्ता अवधिको परिवर्तन। प्रत्येक दिन छोराछोरीलाई मात्र usefully ज्ञान हासिल, तर पनि "Sirius" मा समय खर्च गर्न मद्दत जो रोचक घटनाहरु, भरिएको छ। रचनात्मक सभा र मास्टर कक्षाहरू कल्याण संग संयुक्त, शैक्षिक खेल। इतिहास, अंग्रेजी भाषा र साहित्य: एक विशेष विशेषता मा प्रशिक्षण साथै भएकालाई क्षितिज विस्तार गर्न मद्दत गर्ने अन्य विषयहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। इच्छित भने, छोराछोरीलाई मनोविज्ञान, पत्रकारिता, फोटोग्राफी मा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ।
साईट खेलाडीहरू ओलम्पिक कम्प्लेक्स "Puck" को रंगशालामा मा प्रशिक्षण छन्। ब्यालेट डान्सरहरू ओलम्पिक आइस महल "Iceberg" को सुविधाहरु जानुहोस्। कक्षाकोठाहरू छ अन्तरक्रियात्मक Whiteboards, गर्न "Sirius" सामान्य कुरा हो - भिडियो, audiodoski, इन्टरनेट पहुँच, त्यसैले विदेशी विद्यालय, अनलाइन सम्मेलन बाट शिक्षकहरू संग पाठ। यो संस्थाले प्रतिभाशाली युवा को सुरूवात लागि एक आदर्श मञ्च हो। देश भविष्यमा एक वास्तविक अद्वितीय सहर छ। मुख्य सफलता कारक नै आफ्नै बल मा विश्वास छ। राष्ट्रपति, प्रतिभाशाली बच्चाहरु को एकत्रीकरण को ठाउँमा "पछि नजर", जीवनमा आफ्नो स्थान पाउन छोराछोरीलाई मदत महत्त्व टिप्पणी।
"Sirius" शैक्षिक केन्द्र (सोची) मा काम प्रतिष्ठित मानिन्छ, आमन्त्रण मात्र यहाँ सबै भन्दा राम्रो रूसी pedagogues, शिक्षक विद्यालय, विशेष विद्यालय, उच्च शैक्षिक रूस संस्थाहरु।
युवा खेलाडीहरूलाई यहाँ विभाग र क्षेत्रीय र राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु मा विद्यार्थी सहभागिता को परिणाम मा रूसी संघ विषयहरू को खेल मंत्रालय दिएको सल्लाह अनुसार आदेश को आधार मा चयन गरिएको थियो। विशेषज्ञ फंड बोर्ड टोली को अन्तिम चयन धारण। क्लब वा खेल स्कूल बाट अनुरोध शैक्षिक कार्यक्रम "Sirius" शिक्षा को क्षेत्रीय विभाग पठाइएको छ को चयन भाग लिन। क्षेत्रीय खेलकुद विभाग को आवेदन को विचार पछि परिवर्तन मा टोलीमा समावेश गर्न अनुरोध संकेत जो फंड, को "प्रतिभा र सफलता" को नेतृत्वको पत्र तयार पारे।
को "Sirius" मा "विज्ञान" को निर्देशन
यस क्षेत्रमा भेंट छोराछोरीको लागि शिविरमा निम्न मापदण्ड द्वारा चयन गरिएका छन्:
को Olympiads मा उत्कृष्ट परिणाम, प्रतियोगिताहरु, टूर्नामेंट, क्षेत्रीय रूसी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अर्थपूर्ण घटना रूपमा कोष को विशेषज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त छ।
पुष्टि गर्छ कि कागजात धारकों विशेष अधिकार आफ्नो बौद्धिक गतिविधिको उत्पादन मा एक भेंट विद्यार्थीको। तपाईंको आफ्नै वा टोली परियोजनामा यस्तो परिणाम रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ।
यस्तो बच्चाहरु संग काम गर्न रूसी र विदेशी शैक्षिक संस्थाहरू प्रमुख मात्र सबै भन्दा राम्रो प्राध्यापकहरू आमन्त्रित गरिन्छ।
यो प्रोफाइल परिवर्तन प्राप्त गर्न, युवा कलाकारहरूको र संगीतकार आफ्नो प्रदर्शन वा आफ्नै चित्रहरू नमूनाहरू संग भिडियो को विशेषज्ञ परिषद को न्याय दिन। संगीत को सेन्ट पीटर्सबर्ग परिवारले व्यक्तिगत चयन सञ्चालन। युवा कलाकारहरूको लागि पनि काम गर्दछ, अनलाइन आवेदन संलग्न तस्वीर को रिमोट हेर्ने प्रदान गर्दछ।
रूसी ब्यालेट जवान प्रतिनिधिहरूलाई रचनात्मक समूह चयन रूसी ब्यालेट विद्यालय प्रदान गरिन्छ कि प्रतिनिधित्व मा प्रदर्शन गरिएको छ। तिनीहरूलाई थप सन्दर्भ गर्नुपर्छ आवेदन मा भिडियो प्रस्तुति हेर्न।
शिविरमा को साहित्यिक काम मा एक यात्रा को लागि आवेदकहरुलाई विशिष्ट मापदण्ड आधारित चयन। पहिलो जवान कवि र लेखक द्वारा लिखित कामहरू विश्लेषण।
को "Sirius" मा रहन नियम मा
सोची, ओलम्पिक एवेन्यू को एडलर जिल्ला मा केन्द्र छ, भवन 40. प्रतिभाशाली र भेंट बच्चाहरु को लागि लिन्छ केन्द्र सबै वर्ष दौर। त्यहाँ विशेष प्रोफाइल पारी, त्यसैले लागि लागू गर्दा प्रतिभा सही दिशा चयन गर्न एक विद्यार्थी छ के दर्शाउन महत्त्वपूर्ण छ।
विचार प्रशिक्षण र रूस को मनोरंजन युवा कुलीन, रूसी संघ को अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित लागि केन्द्र बनाउन, शिक्षा, संस्कृति, खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित थियो। यहाँ साँच्चै बौद्धिक वा शारीरिक दिशा मा थप विकास गर्न चाहनुहुन्छ एउटा सही गर्नेहरूलाई प्रतिभाशाली रूसी भएकालाई आउनुहोस्। प्रशिक्षण सत्र साथै विद्यार्थीहरूको एक बाँकी प्राप्त स्थानीय ठाँउहरु थाह छ। "Sirius" छाउनी र केही जिम्मेवारी बासिन्दाहरू छ। नियमहरूमा अनुपालनको साथै अग्रिम भएकालाई मा स्वीकृत गरिएको छ जो दिन को शासन, केन्द्र को व्यवस्थापन, प्रत्येक अन्य आदर गर्न बाध्य छन्। तिनीहरूले, धूम्रपान कुनै अधिकार foul भाषा प्रयोग गरेर पिउने रक्सी,। यसले अरूलाई, कुनै पनि अवैध कार्यहरू शिविर र अपमान मा निषेधित। तिमी मान्छे घर को नियम तोड्न भने, तिनीहरू तुरुन्तै फिर्ता, जाने छैन बोलीको केन्द्र दोस्रो भ्रमण न जो पठाए।
विद्यार्थीलाई लागि व्यावसायिक अभिमुखीकरण के हो?
व्यक्तिगत शैक्षिक trajectory सिक्ने
कानुनी सेवाहरू: यस्तो सेवाहरूको मुख्य फारम रूपमा कानुनी सहायता
बिशप Rodzyanko Vasily: जीवन, प्रवचन, पुस्तकहरू, जीवनी र रोचक तथ्य
"फोर्ड सियरा": एक विश्वसनीय कार परिवार वर्ग
Defrosting - ... छ माछा र मासुको लागि प्रक्रिया आवेदन
ल्याटिन क्वार्टर - पेरिस को सांस्कृतिक जीवनको केन्द्र
इतिहास, मिति र रोचक तथ्य: रूस मा Mongol-तातार जुवा को अन्त। रूस Mongol-तातार जुवा बस्ने रूपमा
बजेट4* (बुल्गारिया, स्वर्ण बालुवा): कोठा को विवरण, होटल सुविधाहरु, समीक्षा